Dawlada Jabuuti oo masaajid xidhay iyo mudaharaad ka dhacay Jabuuti kadib xidhitaanka masjidka. | Biyoguurenews.com
Home Wararka Dawlada Jabuuti oo masaajid xidhay iyo mudaharaad ka dhacay Jabuuti kadib xidhitaanka...
Dawlada Jabuuti oo masaajid xidhay iyo mudaharaad ka dhacay Jabuuti kadib xidhitaanka masjidka.
Dadweyne aad u badan, ayaa magaalada Jabuuti ka sameeyey mudaharaad ay kaga soo horjeedaan masaajid dawladda jabuuti xidhay oo ku yaal xaafadda Kartoon ee Jabuuti, kadib markii dadweynaha xaafadda iyo masaajidkaba lagu eedeeyey inay taageeraan xooggaga mucaaridka USN ee dalka Jabuuti.
Dadka isu soo baxa sameeyey oo ku dhawaaqayey erayo iyo hal-ku-dhegyo ka dhan ah madaxweynaha jabuuti iyo xidhitaanka masaajidka, ayaa socod ku maray qaar ka mid ah jiddadka xaafadda kartoon, iyagoo sitay boodhadh ay ku yaalaan qoraalo lagu cambaaraynayo tallaabada lagu xidhayo masaajidka lagu magacaabo Gaashaamaale oo ah masjid weyn, dad badana ku cibaadaystaan.
Haweenay magaceeda ku sheegtay Nimco, kana mid ah dadweynaha ku dhaqan xaafadda Kartiile ee magaalada Jabuuti, ayaa madaxweynaha iyo dawladda Jabuuti ka codsatay inay ka laabtaan qorshaha lagu doonayo in lagu xidho masaajidka xaafadooda ku yaal.
“Wadan islaam ah ayeynu sheegaynaa, markaa masaajid baa la xidhay xukuumadana uma qurux badna, mana fiicna in cibaadda Ilaahay laga horyimaad, haddiise ay dayn waayaan inay masaajidka xidhaan, waxa ku dhici doonta sida suuratul Fiil ku taal, ciqaabtii Ilaahay ku dhuftay ninkii la odhan jiray Abraha ee isku dayey inuu kabcadda dumiyo. Markaa waxaan dawladda leeyahay cadho iyo ciqaabta Ilaahay iska ilaaliya, farahana ka qaada masaajidka,” ayey tidhi gabadha magaceeda Nimco ku koobtay ee ka soo horjeeda xidhitaanka masaajidka Jabuuti ku yaal.
Qaar ka mid dadweynaha ku dhaqan xaafadda Kartiile, ayaa mudaharaad xooggan oo ay sameeyeen ku muujiyey sida ay uga soo horjeedaan masaajidka lagu cibaadaysto ee xukuumada Jabuuti xidhay, iyagoo dadweynaha isu soo baxa sameeyey tilmaameen inay si adag u difaaci doonaan sidii masaajidku u furnaan lahaa, looguna cibaadaysan lahaa bisha barakaysan ee ramadaan.
“Ma ogolaanayno in masaajid lagu cibaadaysto dusha laga qufulo, maasjidkana waxaa ku cibaadaysta dadweyne badan, dadka islaamka ahna isugu yimaadaan, markaa waxaannu leenahay xukuumada iyo dawladdaba haddii aad masaajidka qufulaysaan, idinka Ilaahay ayaa idin qufuli doonaa.” Sidaana waxa tidhi hooyo ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti ee sameeyey mudaharaadka ay kaga soo horjeedaan qorshaha la sheegay in dawladdu ku doonayso in lagu xidho masaajidka Gaashaamaale ee ku yaal xaafadda Kartiile ee magaalo madaxda dalka Djibuuti.
Previous articleWasiirka diinta iyo aw qaafta somaliland oo cadeeyay in aan meelna laga arag bisha ramadaan
Next articleTaliye Fadal Oo Amaro Culus Dul dhigay Gadiidka,Kana hadlay Tirada Dhimashada Ay sababeen Gadiidku.